Rakkoo amma Itoophiyaa Mudate: – Adda Bilisummaa Oromoo
Akkasumas ibsa Mudde 12 bara 2020 ABO baase keessatti rakkolee siyaasa walxaxaa Itoophiyaa mudatan tarressuun filannoo biyyoleessaa gaggeessuu dursa rakkoolee siyaasaa jiran kana furuun dirqama ta’uu hubachiise. Bakka caasaaleen naannoo hundaa diigamee jirutti, lolaa fi walitti bu’insi bakka
adda addaatti deemaa jirutti fi bakka tasgabbiin naannolee adda addaa keessatti hin jirretti filannoo biyyoolessaa gaggeessuun hin danda’amu. ABO kana hubachuun Naannoon Oromiyaa mootummaa cehumsaa biyyoleessa Oromiyaa ijarrachuun Filannoo sadarkaa Federalawaatti ta’uuf akka of qopheessu yaada dhihesse. Kunis rakko siyaasaa fi jeequmsa Oromiyaa mudachuu maluuf of qopheessuu fi mareelee siyaasaa sadarkaa Federalwaatti ta’uuf bu’uura ta’uu hubachiisa.
ABO haga ammatti tarkaanfiilee uummanni Idil-addunyaa rakkoo kana furuuf fudhatan ni diqisiifata. Haata’u malee rakkoo hedduu bal’aa fi walxaxaa ta’e kuni xiyyeefannaa guddaa fi deemsa waligala ta’e barbaada. Kanaaf ABO dhaabbilee Idil-addunyaa kan akka AU, UNSC, EU fi dhaabbilee biroo dhimmi kuni ilaaluu hundaa yaada ABOn dhiyeesse kana xiyyefannaa itti kennuun dhiibbaa madalawaa ta’e mootummaa aangoorra jiru irra kaa’uun sirna bulshiinsa humna waraanaa uummata irratti diriirfame akka dhaabbatu taasisu ABO ni gaafata. Dhibdeeleen amma biyyittii mudataa jiru kuni akka jirutti itti fufnaan badii ulfaataa keessaa bahuun hin danda’amne biyyittii akka qunnamu hubatamuu qaba. Furmanni waaraa fi dhaabbataa ta’e rakka Itoophiyaaf kan argamu deemsa maree siyaasaa waligalaa qaamolee hunda hammateen duwwaa akka ta’e ABO ni amana. Bakka bu’oonni dhaabileen siyaasaa hundi sirna maree siyaasaa waligalaa ta’u irraa qooda fudhachuun dirqama.
by admin in Waamicha